Ndị njem Uganda na-abata ugbu a nweere onwe ha ịga n'ihu mgbe ha nyochachara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Uganda » Ndị njem Uganda na-abata ugbu a nweere onwe ha ịga n'ihu mgbe ha nyochachara
Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa na Uganda
Uganda na-abata ndị njem
N'ịgbaso nrụgide sitere n'aka ndị njem na mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, a manyere Ministri Ahụike Uganda ilo ụfọdụ achịcha dị umeala n'obi ma kpọọ isi ala maka nrụgide sitere n'aka ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya na ọha na eze na-eme njem ma kwe ka ndị njem na-abata ka ha gaa ebe ha na-aga mgbe nyochachara COVID-19 PCR. mbata.
Nke a bụ mgbe ntuziaka iwu nke mbụ chọrọ ka ndị njem chere nsonaazụ ha ma ha bịarutere n'ọdụ ụgbọ elu zutere nnukwu ọdachi.
Ọtụtụ ndị njem kesara ihe onyonyo nke ahụhụ ha nọ na WhatsApp, twitter, facebook na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta ndị ọzọ ka ha chere ọtụtụ awa n'ọdụ ụgbọ elu.
Ọ bụ ihe ihere nye ụlọ ọrụ na-agbasi mbọ ike iwughachi mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 2 gachara.
Iji chekwaa ihu, nke ugboro abụọ n'ime ihe na-erughị otu izu, e nyere ntụziaka n'aha Gọọmenti Uganda. Nke abụọ a, nke akpọrọ S23/21 COVID-19 usoro ahụike maka ọdụ ụgbọ elu Entebbe International site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ụgbọ elu nke Civil Aviation na Entebbe, gafere. ntuziaka gara aga nke SUP 22/21. Mgbanwe a na-amalite taa na Nọvemba 5.
Ntuziaka ọhụrụ ahụ kwuru:
1. Ndị njem niile na-abata n'ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Entebbe, n'agbanyeghị obodo ha si ma ọ bụ ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ga-anwale COVID-19 amanyere iwu.
2. Maka ịdị mma, ndị njem niile na-abata na ọdụ ụgbọ elu Entebbe International ga-ewere sample ha maka COVID-19 ma hapụ ha ka ha gaa n'ụlọ ha ma ọ bụ gaa n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ maka ikewapụ onwe ha ruo mgbe ha nwetara nsonaazụ ha.
3. A ga-eziga nsonaazụ ule na ekwentị / email ha.
4. Naanị ihe agụpụtara bụ:
- Ụmụaka n'okpuru 6 afọ.
- Ndị ọrụ ụgbọ elu nwere ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 zuru oke.
5. Ndị njem nyochara ihe dị mma ga-esochi ndị otu na-ahụ maka ahụike nke Ministry of Health.
6. Ọgwụgwọ maka ndị njem nọ na (5) n'elu ga-agbaso ntuziaka ọgwụgwọ nke Ministry of Health COVID-19.
7. Ọ bụrụ na onye njem achọpụtara na ọ bịarutere nwere ihe mgbaàmà na-egosi ọrịa COVID-19, a ga-anọpụ iche ma kpọga ya n'ụlọ ọgwụ gọọmentị.
8. Maka nkwado nke ọma na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Entebbe, ndị njem niile na-abata bụ iwu nke:
- dejupụta Ụdị onyunyo ahụike dị n'ịntanetị 24 awa tupu mbata.
- kwụọ US $30 n'ịntanetị 24 awa tupu mbata.
9. A ga-achọrọ ndị njem niile bịarutere ka ha gosi na Health Port Health, asambodo nnwale PCR na-adịghị mma nke COVID-19 maka ule emere n'ime awa 72 site na nchịkọta nlele.
10. A ga-achọrọ ndị njem niile na-apụ apụ ka ha gosi na Health Port Health, COVID-19 na-adịghị mma akwụkwọ PCR maka ule emere n'ime awa 72 site n'oge nchịkọta sample ruo n'ụgbọ mmiri. Ha ga-erube isi na mkpa njem ahụike nke obodo ha na-aga.
11. Ndị njem na-abịarute n'oge a na-alọta, na/ma ọ bụ site na mpaghara dị n'ofe Kampala nwere tiketi ụgbọ elu na ngafe ịbanye, ga-ahapụ ka ha gaa n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ na / ma ọ bụ ebe obibi ha.
12. Ndị njem na-apụ na oge nkwụsị, na / ma ọ bụ site na mpaghara ndị dị n'ofe Kampala nwere tiketi ụgbọ elu dị irè, ga-ahapụ ka ha gaa n'ọdụ ụgbọ elu ebe ha na-aga site n'igosi ndị ọchịchị tiketi ndị njem dị ka ihe akaebe nke ịga n'ọdụ ụgbọ elu.
13. Ndị ọkwọ ụgbọ ala kwesịrị ịnwe ihe akaebe na-egosi na ha si n'ọdụ ụgbọ elu (dị ka tiketi ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ tiketi ndị njem) iji budata ma ọ bụ buru ndị njem.
14. A na-anabata ụgbọ elu ikuku nke mmadụ na-abanye n'obodo ma ọ bụrụ na ọnọdụ ndị a emezue:
– Asambodo ahụike nke kpatara ọnwụ.
- Akụkọ gbasara ọnwụ ma ọ bụ akụkọ ahụike zuru oke sitere na dọkịta/ụlọ ọrụ ahụike na-abịa.
- Asambodo mgbake (gụnyere akwụkwọ ịgba ozu maka ọnwụ n'ihi COVID-19).
- Mpempe akwụkwọ paspọtụ / akwụkwọ njirimara nke onye ahụ nwụrụ anwụ. (Paspọtụ mbụ/akwụkwọ njem/akwụkwọ njirimara a ga-egosi ndị isi mbata na ọpụpụ).
– Mbubata ikike/ikike mbubata site n’aka onye isi oche nke ọrụ ahụike.
- Nkwakọ ngwaahịa kwesịrị ekwesị - ọbọp na akpa ahụ na-adịghị egbochi mmiri wee tinye ya na igbe ozu nke zinc na ígwè mpụta ma ọ bụ igbe osisi.
- A ga-enyocha akwụkwọ ahụ site na ahụike ọdụ ụgbọ mmiri, a ga-emebi ozu ahụ na mbata site na ahụike ọdụ ụgbọ mmiri.
- A ga-eme ozu ndị COVID-19 metụtara na-eso usoro ndị dị ugbu a maka olili sayensị.
15. Iji weta ozu mmadụ na mba ahụ, a ghaghị inweta akwụkwọ ikike site na Ministries of Health and Foreign Affairs.
ETurboNews guzosie ike na ntụziaka nke Civil Aviation Authority (CAA) ugbu a ka enyela ndụmọdụ ndị ọkà mmụta sayensị sitere na General, Health Services, na Ministry of Health nke onye isi nchịkwa Dr. Henry G. Mwebesa na-eduzi.
Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya enweela obi abụọ na Ministri ahụike na-agbasi mbọ ike na nnwale a manyere na mbata, ebe ozi ahụ na-ekwusi ike na ọ bụ ịkwụsị mgbasa nke ụdị COVID-19.
N'ụbọchị na-esote ntuziaka gara aga na nnọkọ ndị nta akụkọ na October 27 nke e mere na ọdụ ụgbọ elu Entebbe, Minista ahụike na-asọpụrụ Jane Ruth Achieng kpebisiri ike ịga n'ihu na usoro nyocha mbụ n'agbanyeghị nsogbu ndị ọ chere ihu na nnọkọ mgbasa ozi, dị ka. igwe okwu na-ada ada, na-awụsa mmiri ozuzo, na oke mmadụ, n'ịkpọ aha ole na ole.
Enweghị afọ ojuju na ichere mgbe ule gasịrị, nwetara nlebara anya nke ndị omebe iwu na Kọmitii Omeiwu na njem nlegharị anya bụ ndị kpọrọ ndị ọrụ sitere na ngalaba njem nlegharị anya ka ha sonye na Ministry of Health (MOH), Uganda Civil Aviation Authority (UCAA), na ndị ọzọ na-etinye aka na ya. mmejuputa iwu nke nnwale na mbata, ka ya na Kọmitii Omeiwu na-ahụ maka ahụike na-edu ndị isi oche, Hon. Ssebikaali Yoweri, na Nọvemba 4, 2021, mgbe nke ahụ gasịrị, ha nyochara akụrụngwa n'ọdụ ụgbọ elu International Entebbe.
Ndị nnọchiteanya sitere na ngalaba njem nlegharị anya bụ Amos Wekesa nke Great Lakes Safaris na Civy Tumisime, Onye isi oche nke Association of Uganda Tour Operators (AUTO). Wekesa kọrọ na ịkagbu ndị ahịa na-achọghị ịgafe ule na igbu oge na-enweghị isi ebe Tumusime rịọrọ arịrịọ maka ndị njem nlegharị anya ịgba ọgwụ mgbochi nwere ule PCR na-adịghị mma (Polymerase Chain Reaction) awa 72 tupu ọ bịarute ka ekwe ka ha gaa n'ebe ha na-aga na-enweghị ịnwale na mbata.
Maka enyemaka ha na enyemaka nke ụlọ ọrụ njem n'ozuzu, Achieng na Ministry of Health kwadoro nrụgide ahụ.
Mmekọrịta dị n'etiti Ministry of Health na ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya adịteghị aka kemgbe akụkụ nke ndị na-eme njem nlegharị anya na-ajụ ajụjụ maka nnwale na ịkwụ ụgwọ maka ule ndị ahụ naanị na ọdụ ụgbọ elu ọ bụghị n'ebe ntinye ndị ọzọ. Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya boro ngalaba ahụike ebubo na ha na-erite uru na ngalaba njem nlegharị anya. N'aka nke ya, ngalaba ahụike agbaghawo ndị na-eme njem nlegharị anya, na-achụpụ ha maka itinye aka na ọrụ ha.
N'ajụjụ ọnụ telivishọn na NTV gbasoro ntuziaka ahụ, onye njikwa mgbasa ozi ọha na UCAA Vianney Lugya kwetara na ya kwenye na nrụgide na-aga n'ihu. O kwuru, sị: "N'etiti abalị nke ọma, ebe anyị malitere ime mkpebi ahụ, a na-ahapụ ndị njem niile ka ha gaa n'ihu mgbe ahọpụtara sample ha, ha gafekwara usoro mbata na ọpụpụ na mbata. Anyị malitere ụgbọ elu Etiopia mgbe etiti abalị gasịrị; anyị nwekwara Rwandair batara yana Egypt Air. N'ụtụtụ a, anyị na-atụ anya ụgbọ elu Uganda, Kenya Airways, na ọtụtụ ụgbọ elu ndị ọzọ, ọ bụkwa nnukwu ahụ efe nye ọdụ ụgbọ elu na usoro ụgbọ njem ikuku."
Banyere nchegbu banyere traceability, o kwuru na ndị ọrụ ahụike nọ n'ọdụ ụgbọ elu anwalela ndị njem 11,449 na n'ime naanị mmadụ 43 ahụ apụtala nke ọma.
“Mgbe ị na-elele foto ka ukwuu n'ihe na-eme, ndị njem na-abịarute, a na-ewere ihe nlele, na… ha na-eche nsonaazụ ya ihe dị ka awa 2 1/2. Were ihe atụ nke onye si US fepụ - njem nke ihe ruru awa iri abụọ, gụnyere njem. Nke ahụ bụ isi mmalite nke ụfọdụ mkpesa. Ya mere, onye na-ama ike gwụrụ, na-edo onwe ya n'okpuru na-echere. Enwere ọtụtụ ndị na-etinye aka na nke a. Anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ na nchekwa, ụlọ akụ, NITA (National Information Technology Authority) na ndị ọzọ.
"Anyị enyochala ọnọdụ ahụ, anyị nyere ndụmọdụ a n'ezie. Enwere m ike ịnye gị ihe atụ nke Dubai ebe a na-ahapụ gị ka ị gaa na nkwari akụ gị mgbe ahọpụtara sample. Agara m ebe ahụ izu ole na ole gara aga, ozugbo m rutere na họtel m, enwetara m nsonaazụ ya.
“Anyị nwetara nzaghachi ka ndị njem nọ na-eme mkpesa banyere ichere, nke a na-akụda ụfọdụ ndị njem ume ime njem. Ihe ịrịba ama nke mmelite kemgbe ntuziaka ahụ malitere achọpụtala usoro dị nro na ụfọdụ ndị na-eme njem nlegharị anya, na-ekwu maka ọnọdụ amaghị aha, na-akọ ndị ahịa ha na-ewe ihe na-erughị nkeji 20 iji kpochapụ usoro ahụ wee gaa n'ihu.
A na-agba ndị njem nlegharị anya ume akwụkwọ online maka mkpa ule ebe a.